Shir looga arrinsanayay ka hortagga nafaqa-darrada oo maanta lagu soo gabagabeeyay Muqdisho - Halbeeg News
Shirka wadatashiga arrimaha nafaqada dalka Xuquuqda Sairka: SONA
MUQDISHO (HALBEEG)- Shirka wadatashiga diyaarinta istaraatiijiyadda hannaanka nafaqada dalka oo maanta la soo xiray
Shir ay soo qabanqaabisay tubta arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo looga arrinsanayay hanaanka diyaarinta istaraatiijiyadda nafaqada dalka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Saraakiisha tubta arrimmaha bulshada ee xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa ujeeddada shiran ku sheegtay diyaarinta istaraajiyad dalka looga ilaalinayo nafaqa darrada mudda shan sano ah.
Iyada oo la raacayo himilooyinka tubta arrimaha bulshada ayaa waxaa ay dowladda Soomaaliya iyo hay’adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada wax ay ka arrinsadeen hanaanka diyaarinta istaraatiijiyadan.
Wasiirrada caafimaadka iyo shaqada xukuumadda Soomaaliya, oo ka hadlay kulankan lagu soo xirayay wadatashiyada ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay waajib ku tahay qorshaha nafaqa darrada looga cirirb tirayo guud ahaan dalka.
Go’aannada iyo natiijooyinkii ka soo baxay shirkan wadatashiga ayaa la hor-geyn doonaa golaha wasiirrada si ay u ansixiyaan looguna saleeyo qorshaha shanta sano ee sare u qaadidda heerka nafaqada dalka.
Ciidanka Ilaalada Badda oo maanta Muqdisho ku xusay sanad-guuradoodii 54aad